PUNTLAND dhagtu waa ay taagan tahay (3 arrin oo xasaasi ah wax ka ogow) ⋆ Soomaaliweyn | Wararka Iyo Warbixinada Dalka | Somalia's Latest News
Home Fikrado PUNTLAND dhagtu waa ay taagan tahay (3 arrin oo xasaasi ah wax...
PUNTLAND dhagtu waa ay taagan tahay (3 arrin oo xasaasi ah wax ka ogow)
Puntland waxa oogu horeeya oo dadku isweydiyaa waa: Maxaa Tukaraq ka Cusub? Doorashada Baarlamanka waa goorma? Wey kudarsanayaan baan maqlay? Dakada Bossaso goormaa dhismaheedu bilaabmi?
Maxaa Tukaraq ka Cusub?
Walow mudo degaankani ay kuwada sugnayeen Somaliland iyo Puntland ciidamadooda, balse xasarada cusubi waxay timi markii ciidamada Somaliland ay kasoo durqeen masafo yar halkii horey ay ujoogeen. Iyadoo taas ay jirto ayaa madaxweynaha cusub ee Somaliland uu dhaar, hanjabaad iyo aflagaato kula kacay dadka dagaanka iyo Puntland, taas oo abuurtay caro aanan lamaleysaneyn heerkeedu halkii uu gaaray. Waxa xigay dagalo is xigay oo labo mar kudhexmaray labada ciidan isla aaga taas oo ay kadhalatay geeri iyo xamaasad dagaal oo sii laba kacleysay.
Intaa wixii kadanbeeyay hub urursi, calaf iyo ciidan lagu daabuleeyo aagaga dagaalka ayeey labada garaba wadeen. Xagga Puntland waji cusub ayuu yeeshay abaabulka dagaalka. Dagaalka ayaa noqday mid beelo beelo loogu biiro, beel walbana hub, ciidan iyo calaf ayeey keeysay jiida dagaalka.
Dowlada Puntland oo markii hore fursado badan ka arkeysay dagaalkan ayaa hada umuuqata mid taladiisa iyo abaabulkiisa lala yeeshay. Puntland ma aysan yeelay ciidan habeysan tan iyo markii la aas aasay. Marka laga tago guutooyin ay ajaanib tababartay oo taladooda ka go’da qolada kacanta kuheysa. Ciidamada Puntland ee darawiish loogu yeero, waxay udhisan yihiin qaab beeleedyo, inta badan guuto kasta iyo horjoogahoda waa iskubeel.
Walow 70% miisaniyada Puntland ay kuqoran tahay in ay kubaxdo ciidamada iyo amniga balse xaqiiqdii lama yaqaan tirada rasmiga ee cidanka daraawiishta. Labadii maamul ee Puntland oogu danbeyay wey isku dayeen in lasameeyo ciidamo sumad ciidan leh oo layaqaan tiradooda iyo tayadooda balse waxaa ka horyimi taliyaasha ciidamada oo qandaraas ku heysta; qorida, rusqeynta iyo mushaharka ciidamada iyaga udiwaan gashay. Waxaan is leeyahay ababulka dagaal ee iminka Puntland kasocda wuxuu noqonkaraa fursad ciidamada lagu mideeyo, laguna diwaan galiyo.
Waxaa dhow wakhtigii Puntland doorasho kadhici laheyd. Sida caadada noqotay wakhti kasta oo ay Puntland doorasho soo dhowaato waxaa cagaha lala galaa qalalaase siyasadeed. Wadanku malaha maxkamad dastuuri, madaxweyne kasta oo soo mara wuxuu doorashada ku galaa inuu dhisi doono maxkamad dasduuri, doorashada tan kuxigtana noqon doonto mid hal qof iyo hal cod ah. Balse waxoogaa markuu joogo waxaa usoo baxa in sida hada xaalku yahay ay ubadiso isaga (status of quo), markuu wakhtigiisu dhamaad yahayna oogu yaraan halsano ayuu isku dayaa inuu kudarsado. Inkastoo hada 5 sano lamarayo oo ah wakhti aad udheer marka laga hadlayo aduunka oo xawli iyo isbadal badani kasocdo, dadbadani waxayba qabaan in 4 sano lagu noqdo.
Baarlamnka hada Jira ee Puntland, in badan waxay rajeynayaan in ay soo noqdaan, sidoo kalena madaxda wadanka oogu sareysa. Waxa jira tiro badan oo musharaxiin baarlamaan iyo madaxweyne oo raba iyagana in ay tartamaan. Qolo walba xisabteeda iyadaa jeebka kuwadata, qolo udhaxeysa kooxahan tartanku kadhaxeeyo majirto oo sharci ku kala saari karta oo aanan aheyn sidii dhaqanku ahaa in la iskula noqodo odey dhaqameydyada.
Alaha unaxariistee wakhtigii Cade iyo Cabdullahi, kooxdaasi waxaa loo yiqiinay CAYAAL BUTAANO. Waxay iskugu jireen rag waxoogaa waaya arag ah oo xukumadii militariga iyo jabhadii SSDF jagooyin kasoo qabtay iyo kuwo qoos ama qaraabo hoose la ahaa labada marxuun. Waxay gacanta kuhayeen dhamaan qandarasyada dowlada iyo hay adahaba. Sida magacoodaba kamuuqata waxa lagu xaman jiray in ay ahayeen rag aad ubalwad badan oo aanan waxba deeqin.
Kuwa hada jooga waxaa loo yaqaan CAYAAL SOCIAL MEDIA. Xaga aqoon xumida, waaayo aragnimo la’aanta, damaca waalan, boobka iyo hanti urursiga waxay kala siman yihiin AARAN JAAN, balse waa dad aad ooga dabacsan xaga dabeecada oonan laheyn cagajugleen iyo cabsigalintii AARAN JAAN lagu yiqiin. Hada waxay usuxul duubayaan sidii madaxweyne GAAS oogu darsan lahaa ama markale usoo noqon lahaa wado kasta ha umaree. Meelkasta madaxweyne GAAS ka khudbeynayo waxa ay kudiyaariyaan rag iyo dumar ay soo xusheen oo meesha kasheega madaxweynaha in dadku ladhacsanyahay hogaankiisa ayna rajeynayaan in uu sii joogo iyagoo aad ufahamsan sida madaxweyne GAAS uu amaanta uugu nugul yahay.
Dadka qaarkii waxay aamin sanyihiin laga soo bilaabo markuu dagaal sokeeye qarxay ilaa 2008 in 60% dhaqalaha Somalida uu yiilay Bossaso halka iminka lagu qiyaaso 15% oo kaliya.
Juquraafi ahaan Somalia, khusuusan Puntland waa dhulka oogu istiraajisan marka laga hadlayo isu gooshka alaabaha kayimaada ama kusocda Asia,Africa iyo Europe. Puntland waa Cost Rica in Africa. Cost Rica waa wadan yar oo South America kuyaal. Sanadkii 1996 ayaa nin wasiir dhaqale kanoqday fahmay in wadankiisu meeshuu kuyaalo awgeed uu noqonkaro (logistic hup) xudunta qeybisa alaabta US and South America ukala socota, riyadas oo rumowday 10 sano kadib.
Bossaso waa meel daris la ah wadamo wax soo saarkoodu uu korayo iyo suuqyada oogu waa weyn ee Africa iyo Carabta. Waa mida Raysal Wasaraha Pakistan uu Farmajo kala hadlay kulankoodii Istambul.
Xagga duulimaadyada, diyaaradaha Asia kasoo duula kuna socda Africa inta badani waxay kor maraan Bossaso. Magalooyinka ganacsiga somalida kuxiran yahay sida: Dubai waa 2-saac, Jeddah -3-saac, Khartoom -3-saac, Heyderabad 1-saac, Kaula Lumpur -4-saac. Taas waxay tusale fiican utahay in diyaradaha xamuulka ahi ay aad oogu baahan yhihiin isticmaalka Bossaso airport hadii lahabeeyo loona qalabeeyo hab calami ah.
Xaga Doorashada. Isimadu waa in ay xaqiijiyaan wadanka in ay doorasho xalaala kadhacdo oo waliba dad aad ooga duwan kuwii hore loo soo xulo golaha baarlamanka cusub. Waxaan kaloo kutalin lahaa in baarlamanka cusub lagu cadaadiyo in ay wakhtiga hogaaminta wadanka wax kabadalaan oo kadhigaan 4 sano si federalka waafaqsan. Sidookale inta aanan la dooran Madaxweyne, in lasoo xulo gudiga maxkamada sare oo ay doortaan hogaanka maxkamada sare, si aan mardanbe loogu haleyn in madaxweyne yimaada soo magacaabo xaakimka maxkamada sare.
W/Q: Axmed Xaaji
Previous articleDegmada Hodan Ee Gobolka Banaadir Oo Loo Magacaabay Gudoomiye Cusub
Next articleAqri: Muxuu Mareykanka taageerada uga jarayaa milatariga DF Somalia?
Doorashada Soomaaliya ee 2020: Damaca Imaaraatka Carabta iyo Sucuudigu ma suurta gali doonaa? Doorashada Soomaaliya ee 2020: Damaca Imaaraatka Carabta iyo Sucuudigu ma suurta...
Daawo:- “Maanta waxaan dhisanayaa barkada dabaasha taa oo ku wareegsan gurigeyga”.
Fallanqeyn: Madaxweyne Farmaajo wuxuu qaatey go’aan wanaagsan